Abathengisi abaphambili be-Islamic Forex banikezela iiAkhawunti ezingatshintshi-ii-Akhawunti 2021
Kwimeko yomthetho we-Sharia (ukuthanda kukaThixo ngoluntu, ngokweQuran) -kukho impikiswano malunga neminyaka malunga nokuba kungathengiswa okanye kuthengiswe i-forex yi-haram okanye i-halal.
Ewe kunjalo, uninzi lwabantu luyazi ukuba ukungcakaza (i-Al-Maisir), utywala (i-Khamr) kunye nengulube (iihagu) zonke zi-haram (ke azivumelekanga) ngokwe-Quran- kodwa ubusazi ukuba ukurhweba nge-forex akufuneki kube njalo?
Kule mihla abaphengululi abaninzi bahlukile kwezimvo, kufuneka bathathele ingqalelo ubomi bale mihla kunye nokuba oko kuthetha ntoni kubantu benkolo yamaSilamsi. Oku kubandakanya ukuhlonipha ngokupheleleyo umthetho wamaSilamsi, kodwa mhlawumbi ukutolika iinxalenye zawo ngokwahlukileyo.
Ukuba ungumlandeli wenkolo yamaSilamsi kwaye usafuna ukurhweba nge-forex, uyakonwabela ukwazi ukuba kunokwenzeka ukuvula iakhawunti yokurhweba yehafu.
Kwesi sikhokelo, siza kuchaza ukuba zeziphi ii-Islamic forex brokers, iimetrikhi eziphambili ekufuneka uzijongile xa ukhetha iqonga elihlangabezana neemfuno zakho, kwaye ngabaphi ababoneleli we cinga ukuba kuya kufuneka uthathele ingqalelo kwi2021.
Yintoni iAkhawunti yamaSilamsi yeBroker Forex?
Ngamafutshane, iakhawunti yama-Islamic broker ye-Islamic ikhona ukuvumela abalandeli benkolo yamaSilamsi ukuba bakwazi ukurhweba ngezezimali-ngelixa behlala beyinyani kwiinkolelo zabo.
Ngaba amaqonga ama-broker enza njani ukuba oku kwenzeke? Ngokomthetho weSharia, ukuqokelelwa komdla wemali akuvunyelwe ngokungqongqo, ke iiakhawunti zamaSilamsi azifumani okanye zihlawule inzala kwaphela.
Ngamanye amaxesha kuthiwa 'yiakhawunti ye-halal ye-forex' okanye 'iakhawunti engatshintshanga' -eakhawunti bezikade zikho okwexeshana. Ziyanda iifemu zabarhwebi ezibonelela ngolu hlobo lweakhawunti. Ezinye zezo zingazukutshintsha iakhawunti ukuze zilungele iimfuno zonqulo lomntu ngamnye. Masicacise kancinci malunga nezinto ezisisiseko zobuSilamsi Ukurhweba kwangaphambili.
Izinto ezisisiseko kwi-Forex yoRhwebo ngeHalal
Isiseko seakhawunti ye-Islamic forex eneneni sinokuthelekiswa kakhulu neeakhawunti ze-forex eziqhelekileyo. Oku kunjalo, ngaphandle kwento yokuba ama-Islamic forex brokers kufuneka ahlangane ngokusisiseko nemithetho yezemali yamaSilamsi.
Izinto ezisisiseko kwezemali zamaSilamsi zezi:
Ukuqikelela / ukuNgcakaza- 'maisir'
Ukutshaja okanye ukuhlawula inzala - 'riba'
Umngcipheko kunye nokungaqiniseki- 'gharar'
Isandla - 'urhwebo lwehafu'
Njengoko besesitshilo, inqaku elipheleleyo labarhwebi bamaSilamsi kukubonelela ngeakhawunti ye-forex yabantu abafuna ukuhlala bethembekile kwinkolo yabo. Indlela amazwe aseNtshona athengisa ngayo ayithathi le migaqo mine.
Nangona amathambo angenanto orhwebo lwe-forex engahambelani noMthetho weSharia, kukho ezinye izinto ezinje ngemirhumo yemali yobusuku njlnjl.
Ukhumbula ukuba malunga neepesenti ezingama-25 zeplanethi ngabalandeli benkolo yamaSilamsi, ayothusi into yokuba ingxoxo endala yokuba urhwebo lwe-forex yi-haram okanye i-halal yinto eqhubekayo.
Njengoko sisityhila kwesi sikhokelo, imiba yokurhweba kwangaphambili yamkelekile ngokugqibeleleyo kumthetho weSharia - kodwa izinto zinokuba nzima kumntu wokholo lwamaSilamsi ozama ukusebenzisa Zemveli Iakhawunti ye forex.
Kukho izinto ezinokwenza ukuba kube kufutshane-ekunokwenzeka ukuba uhlale unembeko kwinkolo yakho ngalo lonke ixesha, ezinje ngobusuku obunye kunye nokutshintsha imali. Ke ungu-100% ongcono ekurhwebeni kuphela nabathengisi be-Islamic forex. Ngale ndlela, akukho bungozi bokuzibandakanya naziphi na izitokhwe zeharam okanye iibhondi.
Sidibanise ulwazi oluninzi malunga nemigaqo ephambili yomthetho wezemali wamaSilamsi ukunceda ukucoca inkungu.
Maisir (Uqikelelo / Ukungcakaza)
Lo mmandla womthetho wezemali wamaSilamsi ulawulwa ngokungqongqo yile migaqo iphambili ilandelayo:
Kuyaziwa ukuba ukungcakaza akuvumelekanga kubalandeli benkolo yamaSilamsi, kodwa ngaba ukurhweba nge-forex nako ngumdlalo wamathuba?
Kubekho impikiswano enkulu ngalo mbandela, Emva kwayo yonke loo nto, inyani kukuba uthenga kwaye uthengisa iimali, kwaye eyona njongo iphambili kukwenza inzuzo ngokwamaxabiso anyukayo emarike ye-forex.
Ngoku jonga ukuba ukuze urhwebe i-forex, abarhwebi kufuneka bafunde uhlalutyo lobuchwephesha, iitshathi zamanani kunye nedatha yezembali- singasathethi ke ukuba sinesicwangciso esiliqili.
Umntu unokuphikisa ukuba oku kuthetha ukurhweba kwangaphambili kwayo nantoni na kodwa ngumdlalo wethamsanqa, kwaye ngenxa yoko ukungangcakazi. Ukuphumelela kurhwebo lwe-forex kufuna isixa esithile sezakhono kunye nophando-ke akunakuthathelwa ingqalelo njenge-haram.
I-Riba yi-Arabhu ngenzala. URiba uharam njengoko kungekho mlandeli wenkolo yamaSilamsi avunyelweyo ukuba afumane okanye aboleke imali. Xa kuziwa kwibhanki yamaSilamsi, akukho mdla nakweyiphi na iakhawunti, nokonga okanye iakhawunti yangoku- kwaye kuyafana nokubambisa.
Ukuzama ukoyisa umthetho we-riba, abantu basebenzisa u-'Bai 'al-Inah' okuthetha 'ukuthengisa nokuthenga kwakhona'. Le yindlela yemali yamaSilamsi evumela abantu benkolo yamaSilamsi ukuba baboleke.
Masithi umntu uyakuthengisa ngeasethi
Endaweni yokuhlawula i-asethi ngqo ngemali, 'umbolekisi' uyinika ngetyala (ngendleko esisigxina)
'Umbolekisi' wongeza into yenzuzo
Loo mntu ke uthengela i-asethi kuwe kwangoko, ngemali, nangexabiso elicwangciswe kwangaphambili
Oku kuthetha ukuba umntu okunike ikhredithi ezakhe i-asethi kwaye uyifumene imali oyifunayo
Ngoku kufuneka uhlawule ixabiso leaseti ngezavenge, kunye nento yenzuzo ekuvunyelwene ngayo ngaphambili
Kukho ukungavisisani rhoqo kule nkqubo, ihlala iphakathi kweyona mimandla iphambili yezeMali yamaSilamsi - iMENA (kuMbindi Mpuma nakuMntla Afrika), naseIndonesia / naseMalaysia.
Ngokwesiqhelo, xa uvula iakhawunti kunye nomthengisi we-forex, kwimeko apho ubambe isikhundla emva kokuba iseshoni yorhwebo ivaliwe, umrhwebi uza kuthatha ikhomishini yokutshintsha (umrhumo wenkxaso yobusuku).
Njengoko umrhwebi ekunika imboleko ngokungangqalanga kwisimo sombane. - oku kuthetha ukuba yenza inzuzo. Kule meko, ithathwa njenge-haram, njengoko umdla udlala indima.
Umahluko ophambili kukuba - ama-Islamic brokers aphelise ukutshintsha inzala. Into ebangela umdla kukuba, ngokomthetho wezemali wamaSilamsi, abalandeli bokholo banokuthatha imali-mboleko ngaphandle kwenzala ukuze benze utyalo-mali kwiinzuzo.
Ama-Islamic forex brokers kusafuneka enze imali ngenkonzo ayibonelelayo, nangona kunjalo, baya kuhlala bekwenza oku ngokwakha iindleko zabo sasazwa.
IGharar (Ubume bomngcipheko / ukungaqiniseki kutyalo mali)
Ukuthetha nge-gharar-iQuran ithi "Kwaye musani ukuyidla niyigqibe ipropathi yenu kwizinto ezililize" UGharar ukhankanyiwe nakwincwadi 'hadith' apho ithi "Musa ukuthengisa ngento engekho nawe". Umyalezo ucacile.
Ngaphantsi kwale khowudi yezemali yamaSilamsi, nakuphi na ukurhweba ngokungaqiniseki okugqithisileyo okanye umngcipheko akuvumelekanga ngokungqongqo phantsi kweSharia Law. Umzekelo, ukuthengisa okufutshane, iikontraki ezivela kwezinye, kunye nekamva zonke zi-haram kuba azizukuhlawulwa kwintengiselwano efanayo.
Ngelixa ukurhweba nge-Islamic forex brokers yinto eyahlukileyo ye-kettle yeentlanzi. Ngokubalulekileyo, awudingi ukuba nexhala lokophula le mithetho njengoko iakhawunti yakho iye yahlengahlengiswa ukuze uhlale uhlonipha yona.
Isandla kwiNtengiso yamaSilamsi ngesandla
Kwi-Islam, 'ukurhweba' uqobo kuvunyelwe, kodwa kuphela ukuba kwenziwe 'ngesandla'. Kwiminyaka eyadlulayo, oku kwakuthetha ubuso ngobuso. Ewe kwezi ntsuku uninzi lonxibelelwano lwentengiso lwenziwa kwindawo ye-Intanethi.
Abanye abaphengululi bathi ukurhweba kufanele ukuba kube sisiqingatha ngenxa yokuba kusekho phakathi kwamaqela amabini (wena kunye nomrhwebi). Okwangoku, iinzame zokurhweba kufuneka zigqitywe kwiseshoni enye yokuthengisa.
Xa kuziwa kwi-forex, ii-odolo zihlala zenziwa kwangoko, ezisebenza kakuhle kubarhwebi bama-Islamic forex kwaye bahlala bethembekile kwimithetho yamaSilamsi.
Ixesha elifutshane nelifutshane kukuba ama-Islamic forex brokers kufuneka ahloniphe zonke izinto ezisisiseko zezemali zamaSilamsi kunye noMthetho weSharia-ngelixesha usakunika ukufikelela kwiimarike ze-forex zehlabathi. Ngokurhweba nge-halal ye-forex, unokuhlala unyanisekile kwimigaqo yokuziphatha yenkolo kodwa uthathe inxaxheba kumathuba otyalo-mali.
Ama-Islamic Forex Brokers: IiKhomishini
Ngokuchasene neakhawunti yomrhwebi yemveli, iiakhawunti zesozimali zamaSilamsi ziza notshintshiselwano ngenzala. Oku kuyimfuneko ukuze ithathelwe ingqalelo njenge-halal. Njengoko besesichazile ngaphambilana, kutshintshwa inzala xa umntu eshiya indawo yakhe ivulekile ubusuku bonke-njengoko behlawuliswa umrhumo.
Ukuphinda-phinda, xa kufikwa kwiakhawunti yama-Islamic broker, akukho nzala-ke ngoko akukho mali yokutshintsha ibonwayo. Ukuze i-forex brokerage yenze inzuzo, kuya kufuneka uhlawule ezinye iifizi ezinje:
Zonke ezi zinto zingasentla zithathwa njenge-halal kurhwebo lwe-forex. Ngale nto ithethwayo, ezi ntlawulo zingasentla zinokubandakanywa ekusasazeni. Kananjalo, kuphela 'umrhumo' owuhlawulayo xa usebenzisa i-Islamic broker ethembekileyo yamaSilamsi ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso lamaqabane akho awakhethileyo.
Ukurhweba nge-Forex yamaSilamsi: UngaQalisa njani
Okwangoku uyazi ukuba unokuhlala unyanisekile kwinkolo yakho yamaSilamsi ngelixa urhweba nge-forex. Kananjalo, siza kukhawuleza sibale ezi ntlobo zintathu ziphambili zokurhweba oza kuthi uthenge kwaye uthengise iimali.
Ukuba ukhona urhwebo usuku, Kuya kufuneka uvale indawo yakho yokuthengisa ngaphambi kokuba imarike ivalwe. Ngamanye amagama, ngaphambi kokuba usuku lokurhweba luphele. Kungoko igama, ukuthengisa kwemini kwenziwa ngolunye usuku.
Oku kuthetha ukuba malunga nokuhlala uyinyani kwaye uthembekile kuMthetho we-Sharia, akukho mrhumo wobusuku bonke (swap commission). Into emnandi ngokusebenzisa iakhawunti yomthengisi wamaSilamsi, ngaphezulu komgangatho omnye, kukuba awudingi ukuba nexhala ngokuvala urhwebo kunye nokungena kwimirhumo yasebusuku.
Kulula nje, scalping Ifuna ukuvula izithuba ezininzi ezincinci eziza kuthi zivale ngexesha lemizuzwana, okanye imizuzu. Kungenxa yokuba urhwebo luvalwa ngexabiso elikhawulezileyo- awunakukhathazeka malunga nomdla, nto leyo eyenza ukuba ilungele abalandeli benkolo yamaSilamsi!
Ngapha koko, ukuba ubufuna, ungathengisa ngokwenyani usebenzisa iakhawunti esemgangathweni ye-forex xa usebenzisa isicwangciso se-scalping. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukugcina izikhundla zakho zivulekile ixesha elide, ke ukunqanda umdla, ekuphela kwento onokuyenza kukunamathela kumthengisi we-Islamic forex.
Ekuphela kwendlela yokusebenzisa i Ukuguqula ukurhweba Isicwangciso sisebenzisa umthengisi wakho we-Islamic forex. Oku kusebenzisa isicwangciso sokushiya izikhundla zivulekile kangangeentsuku okanye rhoqo kwiiveki ngexesha. Eyona nto ibaluleke kakhulu, kubalulekile ukuba usebenzise iakhawunti engenakho ukutshintsha ukuze uphephe amaxabiso enzala.
Ukuba ubusebenzise iakhawunti esemgangathweni, umzekelo, kuya kufuneka ushiye nayiphi na inzuzo yezemali. Ngokusebenzisa i-akhawunti yamaSilamsi / engenakutshintsha ususa umngcipheko wokushiya indawo evulekileyo ubusuku bonke ngempazamo.
Uyifumana njani i-Islamic Forex Broker
Ngelixa kukho amawaka wabarhwebi be-forex kwindawo, ayizizo zonke ziya kuba zilungele abalandeli benkolo yamaSilamsi. Kunokuba nzima ngokwaneleyo kumaxesha amahle okufumana ifemi elungileyo yomrhwebi, ke xa ufuna iakhawunti ethile kunye niche, ukufumana enye kunokuba nzima ngakumbi.
Sibeke ndawonye uluhlu lwezinto ekufuneka uziqwalasele xa ukhangela oyena mthengisi mhle wamaSilamsi nina. Ukuba unokwenza ngokuphefumlelwa ngakumbi, sikwadwelise abona barhwebi baphambili be-Islamic ye-2021 ukuya ezantsi kweli phepha.
Ngaba uMrhwebi ulawulwa?
Nangona oku kunokuvakala ngokucacileyo, uya kumangaliswa kukuba bangaphi abathengi bakho ababhabha phantsi kwe-radar. Amaqonga anikezela ngeenkonzo zokurhweba kubarhwebi ngaphandle kokubekwa esweni yiyo nayiphi na imibutho yolawulo.
Okokuqala, asisokuze sicebise umthengisi wama-Islamic kuwe ongenayo ilayisensi evela kumzimba osemthethweni olawulayo. Okwesibini, kubalulekile ukuba uqhube uphando lwakho xa ujonga umrhwebi.
Into yokuqala kuluhlu lwakho kufuneka ibe kukuqinisekisa ukuba iqonga libonisa ilayisensi esemthethweni. Ukuba use-UK, umzekelo, oku kuya kuvela kwi-FCA (iGunya lokuZiphatha kwezeMali).
Ukuba awuqinisekanga, masithi iwebhusayithi ibonisa inombolo yelayisensi ye-FCA. Unokuhlala usiya kwiqonga elisemthethweni le-FCA kwaye uqhube uphando olulula lwenkampani ukuze ulubuyise.
I-FCA inemigaqo kunye nemigaqo ekhoyo eqinisekisa ukuba imali yakho igcinwe kwiakhawunti eyahlukileyo kwi-broker firm, kwimeko yolwaphulo-mthetho lwezezimali okanye ukubhengezwa. Ikwayimeko enjalo eminye imibutho ethembekileyo yolawulo- njenge-ASIC (Australia), CYSEC (Cyprus), kunye neMAS (Singapore).
Enye into ethatha isigqibo kuwe xa ujonge umrhwebi ongumbhali wamaSilamsi yeyiphi idipozithi kunye nokukhetha onokuzifumana. Uninzi lwabarhwebi be-Islamic forex bayakuvumela ukuba ufake imali usebenzisa i-bhanki ngebhanki yakho yesiqhelo (ekwabizwa ngokuba kukudluliselwa kweengcingo).
Ukutshintshwa kweBhanki yindlela ekhuselekileyo yokuhlawula abantu abaninzi abayaziyo, nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku kunokulibazisa umhla wakho wokuqalisa ngeentsuku ezimbalwa kwezinye iimeko.
Ngenxa yeso sizathu, kuyacetyiswa ukuba ukhethe iqonga elamkela iindlela ngeendlela zokuhlawula ezinje ngeKhadi lokuthenga ngetyala / ngeDebit kunye ne-e-wallets njengePayPal kunye neNeteller- njengoko ezi dipozithi zikhawuleza.
Ukurhoxiswa kungathatha ukuya kwiintsuku ezimbini ukuqhubekeka, ngokuyinxenye ngenxa ye-KYC (Yazi umThengi wakho) iitshekhi kwaye ngenxa yendlela oyikhethileyo yokuhlawula.
Imali ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele kwiqonga lakho lomthengisi kukusasazeka. Ukuba awuqinisekanga ukuba yintoni leyo, kubalulekile umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa lezibini zangaphambili othengisayo. Oku kusasazeka kuhlala kulinganiswa 'iipipi'kwaye inokuchaphazela kakhulu ukufunyanwa kwakho ngokubanzi.
Umzekelo, masithi ukusasazeka kwe-GBP / USD ziipips ezi-3. Ukuze uqhekeze kuya kufuneka wenze ubuncinci iipipsi ze-3 kwinzuzo.
Nanku umzekelo wendlela ukusasazeka kolo rhwebo kuya kujongeka ngayo:
Njengoko besesitshilo, uthengisa i-GBP / i-USD ngomthengisi wakho we-Islamic forex
Ixabiso 'lokuthenga' ngu-1.1200
Ixabiso 'lokuthengisa' li-1.1203
Njengoko ubona inani lokugqibela libonisa elona candelo lincinci ukuba ixabiso lesibini le-forex liya kuhamba
Kule meko, ukusasazeka kwe-GBP / USD ziipips ezi-3
Ezahlukeneyo zeZibini ze-Forex
Ukuba uthanda ukugxila kwimo enye okanye ezimbini zemali emva koko unokucinga ukuba awudingi inani eliphezulu lezibini ze forex onokukhetha kuzo. Eli licebo elivavanyiweyo kwaye lavavanywa kwisithuba se-forex, njengoko ukwazi ukuchitha ixesha lakho lophando kwizibini ezimbalwa.
Ngamanye amaxesha kungcono ukwenza into ibe nye okanye zimbini kakuhle kunokuba ube “nguJack wabo bonke ubugcisa kunye nenkosi yezinye”. Nangona kunjalo, kunokuza ixesha xa do ufuna ukwahlula iphothifoliyo yakho, kwaye xa lifikile elo xesha kungcono ufumane ukufikelela kwiimfumba zezibini zeFX.
Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ujonge ama-Islamic brokers anikezela ngeendlela ezahlukeneyo zabantwana, 'majors', kunye 'neexotic'. Uyakwazi ukufumana lonke olu lwazi kwiwebhusayithi yomrhwebi kwaye kuya kufuneka ujonge zonke iimetrikhi ezikolu luhlu ngaphambi kokuba ubhalise.
Izikhombisi zobuGcisa kunye nezixhobo zoRhwebo
Enye into ekufuneka uyijongile xa ujonga ukuvula iakhawunti ye-Islamic ye-forex zezixhobo zokurhweba kunye nezinto zemfundo ezikhoyo.
Ukukunika umbono wento ekufuneka ujonge kuyo sidwelise ezinye zezona zalathisi zibalulekileyo zobugcisa ezisetyenziswa ngabarhwebi be forex.
Isalathiso seChannel yeZinto (CCI)
Inkxaso kunye nenkcaso
Ukurhweba kwangaphambili akukho lula. Ngaphandle kokuba usebenzisa inkqubo ezenzekelayo efuna uphando, itshathi yokufunda kunye nokugcina iindaba zehlabathi. Oku kusizisa kakuhle kwizixhobo zokurhweba.
Zonke i-Islamic forex brokers zahlukile ke ziya kuba nemali eyahlukileyo kunye nezalathi ezahlukeneyo kunye nezixhobo ezakhelwe kule ndawo. Unokufikelela kwizalathi, iitshathi kunye nezixhobo ngeMetaTrader4, eliliqonga lokurhweba elihlala lixhaswa ngamanye ama-Islamic forex brokers.
Ezinye zezixhobo zorhwebo ezaziwa kakhulu ezisetyenziswa ngabarhwebi be forex ngaphambili zezi zilandelayo:
Iqonga lokuthengisa iMetaTrader4
Izixhobo ezisisiseko zohlalutyo ezinje ngeekhalenda zeendaba zoqoqosho
Iindaba zeendaba zemali ezifana neBloomberg kunye neReuters
Isixhobo sokubala sepip
Izixhobo zonxibelelaniso lwemali
Ixesha lokutshintsha kwexesha
Umrhwebi usasaza isixhobo sokuthelekisa
Isilinganiselo sokubala sokubala
Idayari yokuthengisa / ijenali
Inkonzo elungileyo kubathengi ibalulekile. Indlela elungileyo yokufumana ukuqonda kokusebenza kweqela lenkxaso yabathengi kukufunda uphononongo lwabathengi. Ukuba inkonzo ayilunganga, abantu bazakuthetha ngayo.
Jonga inkxaso yabathengi engama-24/7. Emva kwayo yonke loo nto, i-forex yintengiso ye-24/7. Ingxoxo ebukhoma ihlala iyeyona ndlela ithandwayo kubarhwebi njengoko ikhawuleza. Ngenye indlela, unokulindela ukubona idilesi ye-imeyile kwaye kwezinye iimeko inombolo yefowuni.
Ukuba umthengisi wakho we-Islamic forex umthengisi unobukho obusempilweni kwimithombo yeendaba kunokuba luncedo kakhulu ekugcineni unolwazi kunye nokuncokola nabanye abathengisi.
Ndisayina njani ukuba ndibhalise kunye ne-Islamic Forex Broker?
Ukuza kuthi ga ngoku, sele sigubungele yonke into ekufuneka siyazi malunga nabarhwebi be-Islamic forex kunye nokuba zeziphi iimetriki ezibalulekileyo xa kusiziwa ekukhetheni enye. Ukuba awukafumani broker efanelekileyo ngokwakho, sidwelise ezinye zeyona nto iphambili kweli phepha ukuze uyiqwalasele.
Ukuba ulungele ukuqalisa, emva koko sibeke inyathelo ngenyathelo ngesikhokelo sendlela yokubhalisa.
Inyathelo 1 -Vula iAkhawunti yamaSilamsi
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwiqonga lomrhwebi olikhethileyo ukuba ubhalise kulo. Inkqubo ilingana ngokufanayo naphi na apho uya khona, njengoko indawo izakubuza igama lakho elipheleleyo, idilesi, i-imeyile kunye negama eliyimfihlo elilodwa.
Okulandelayo, kuya kufuneka uphendule imibuzo embalwa malunga nemeko yakho yezemali efana nomvuzo wenyanga kunye nenqanaba lomsebenzi. Isizathu sokuba abarhwebi babuze malunga nokuma kwakho kwezemali kukuba babonelele ngemveliso efanelekileyo.
Inyathelo 2 - Ngenisa iMbali yoRhwebo
Amathuba uya kubuzwa imibuzo eyahlukeneyo ngokubhekisele kwimbali yakho yorhwebo. I-Forex ayisiyiyo eyentliziyo etyhafileyo, ke olu lwazi luya kunceda umrhwebi ukuba aqonde inqanaba lamava akho, urhwebo obukhe wabandakanyeka kulo kwixa elidlulileyo, kwaye loluphi utyalomali ojolise kulo.
Inyathelo 3-Yazi uMthengi wakho
Ngenxa ye-KYC esithethe ngayo ngaphambili, unokukwazi ukufaka imali kwiakhawunti yakho xa uqinisekisile isazisi sakho. Oku kuhlala kucaciswa ngumrhwebi xa uthumela ikopi yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Njengelinye ukhuseleko, uninzi lwabarhwebi luya kufuna ikopi yetyala elisetyenzisiweyo okanye ingxelo yebhanki enegama lakho nedilesi.
Inyathelo 4-Faka iAkhawunti yakho yamaSilamsi kwiBroker
Nje ukuba ungenise amaxwebhu akho e-KYC, ungaqhubeka wenze idiphozithi. Njengoko sichukumisile, iindlela zokuhlawula ziyahluka, soloko ujonga indawo ukuze ubone ukuba yintoni eza kufumaneka kuwe.
Gcina ukhumbula ukuba ukuhanjiswa kweebhanki kungathatha iintsuku ukucacisa, ngelixa ezinye iindlela zenzeka kwangoko.
Inyathelo 5 - Qalisa ukuThengisa nge-Forex
Ngoku udlule kumanyathelo oku-1 ukuya kwayi-4, waqinisekisa ukuba ungubani wena, kwaye waxhasa ngezimali iakhawunti yakho - ungaqala ukurhweba kwangaphambili.
Ukuba uqala ngokurhweba nge-forex, ungaqala ngeakhawunti yeedemo okanye urhwebe ngokwandisa okuncinci usebenzisa i-Islamic akhawunti encinci. Nokuba nje ufumana iinyawo zakho kwisithuba se-forex.
I-5 yamaSilamsi abathengisayo be-Forex ye-2021
1. I-AvaTrade - Sharia-ehambelana neMT4 / 5 yokuThengisa
I-AvaTrade ngomnye umrhwebi ohloniphekileyo kuluhlu lwethu kwaye uzilungelelanise ngokupheleleyo iiakhawunti zayo zama-Islamic forex ukuze zilungele umthengi ngamnye. Ukuba ungumnini weakhawunti yamaSilamsi, ungalindela ukuba iirhafu zingadluli (iirhafu zobusuku bonke) okanye utshintshe yonke imihla. Endaweni yoko, uya kuhlawuliswa iifizi zolawulo xa urhweba nge-forex. Oku kuthetha ukuba usenako ukuhlala unyanisekile kwimithetho yezemali yamaSilamsi.
Eli qonga labarhwebi lixhasa iMetaTrader4 kunye neMetatrader5 ukuze ukwazi ukurhweba ngezinto zorhwebo (ukuba nje ziyi-halal), ii-CFD kunye nezibini zemali ngokucacileyo.
Iqonga liyaziqhenya ngokuba akuyi kubakho mrhumo wekhomishini ufihliweyo okanye ukudideka kweentlawulo ongazi ngazo. Abantu benkolo yamaSilamsi banokufikelela kurhwebo lwesilivere kunye negolide. Ukurhweba nge-Crypto akuvumelekanga kule akhawunti yamaSilamsi, ke ukuba ufuna ukurhweba ngeemali ezixabisekileyo kuya kufuneka usebenzise iakhawunti esemgangathweni.
Xa kuziwa kwi-forex, TRY, RUB, ZAR, kunye ne-MXN izibini zonke azibandakanywa kwiiAkhawunti ze-Islamic. Ezinye zonke ziyinzala ethengiswayo / i-commission-free kodwa kufuneka ulindele ukwanda kokusasazeka - Emva koko, abathengisi be-forex yamaSilamsi basafuna ukwenza imali.
Le femu yokurhweba iyayihlonipha ngokupheleleyo yonke imithetho yezemali yamaSilamsi kwaye iqhuba ngokuthengisa kwangoko. AmaSilamsi abathengisi be-forex banelungelo lokufikelela ngokungenamda kuwo onke amaqonga ngaphandle kwentlawulo (njenge-android, iOS kunye neWebTrader),
Iimfumba zemali ezibini zokurhweba
Kulula ukuvula iakhawunti yamaSilamsi
Kwesi sikhokelo, sigubungele malunga nayo yonke into ekufuneka siyazi malunga nabarhwebi be-Islamic forex, kunye neemetrikhi eziphambili ekufuneka ujonge kuzo xa ufumana efanelekileyo kwimisebenzi yakho yorhwebo.
Njengoko sele siphawulile, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ayizizo zonke iiplatifomu zabarhwebi eziza kubhengeza iiakhawunti zobuSilamsi, njengoko ngamanye amaxesha zisetyenziswa njengee-akhawunti 'ezingatshintshiswanga' okanye 'iihalali'. Ngamafutshane, oku kuthetha ukuba yonke imirhumo irhoxisiwe ngokubhekisele kwimithetho yezemali yamaSilamsi.
Njengoko besigubungele, ngokusebenzisa kuphela ama-Islamic brokers alawulwa ngokupheleleyo, uyazi ukuba iimali zakho zorhwebo zahlulwe ngokuzenzekelayo kulezo zabarhwebi, phakathi kweminye iminatha yokhuseleko. Bonke abathengisi abanconyelwe sithi balawulwa ngokupheleleyo kukhuseleko lwakho.
Yintoni i-Islamic Forex Broker?
Umrhwebi we-Islamic forex ngumthengisi we-forex obonelela ngorhwebo olungenakutshintsha ukuvumela abathengisi ukuba bahlale bethembekile kwinkolo yabo yamaSilamsi, ethintela intlawulo yenzala.
Ndingayivula njani iakhawunti kunye nomthengisi we-Islamic forex?
Ngokubanzi, wakuba ufumene umthengisi we-forex oyithandayo, ungaqhagamshelana neenkonzo zabathengi kwaye ubacele ukuba baguqule iakhawunti esemgangathweni ukuze ihambelane neemfuno zakho
Ndingayifaka njani kwiakhawunti yam entsha ye-Islamic Forex?
Ungafaka kwiakhawunti yakho ye-Islamic forex ngokulula. Uninzi lwamaqonga yimeko yokungena kunye nokukhetha indlela yokubhatala yokufaka imali.
Ngaba ayisiyo-haram yokuxhasa imali ngobusuku?
Ewe kunjalo, ke kwiiakhawunti zamaSilamsi ze-forex, le ntlawulo iyarhoxiswa.
Ukuba ama-Islamic forex brokers akahlawulisi nzala, bayenza njani imali?
Uninzi lwexesha labarhwebi benza imali ngokusasazeka- ngumahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso leasethi.
Ngaba ndiza kuncitshiswa kweziphi i-FX ezibini endinokuzithengisa kwiAkhawunti yamaSilamsi?
Kwiimeko ezininzi, zonke iiperi zemali zinokuthengiswa ngaphakathi kweSharia Law, ngenxa yokuba iiakhawunti zamaSilamsi zilungiselelwe ngokukodwa abalandeli benkolo yamaSilamsi. Nangona kunjalo, abathengisi abohlukeneyo banemithetho eyahlukeneyo, oko kuthetha ukuba ezinye izibini zinokuthintelwa.
Yintoni kanye kanye iakhawunti engenasiphelo?
Ama-akhawunti amaSilamsi ngamanye amaxesha abizwa ngokuba ziiakhawunti ezingatshintshi. Ngamafutshane, oku kukuvumela ukuba ugcine izikhundla zivulekile ubusuku bonke ngaphandle kokwenza umrhumo wenzala.